Fil d'actualités du 20/03/2018
20/03/2018 - 15:00 : TRIBONALY ANTSIRABE: Nahazo fahafahana ny 17 tamin'ireo 19 nosamborina noho ny fitondrana fitaovam-piadiana hanenjehana dahalo tany Mahaiza, ary ny 2 kosa no notazonina.
20/03/2018 - 14:20 : TSIMBAZAZA: Manomboka ny lanonana mikasika ny fandaniana ny volavolan-dalàna fehizoro mikasika ny fifidianana. Tonga maro ny solombavambahoaka. Andrasana ny tohiny!
20/03/2018 - 13:40 : RECEF: Nisokatra androany ary haharitra 3 andro ny Fikaonan-doha Iraisam-pirenen'ireo mpikarakara ny fifidianana, ho an'ny tany Frankofonina hatramin'ny 50 no mandray anjara ao, ka ny 34 dia efa anatin'ilay antsoina hoe RECEF ary vao hiditra ny hafa.
20/03/2018 - 13:20 : TSIMBAZAZA: Mandeha ny tatitra momba ny asam-baomiera natao mialohan'ny handaniana ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana. Eo amin'ny 110 mahery eo ireo solombavambahoaka tonga manatrika ny fivoriana.
20/03/2018 - 13:00 : TARIKA NY AINGA: Hisy ny fampisehoana goavana hotanterahina eny Antsahamanitra ny alatsinain'ny paska 2 aprily ho avy izao.
20/03/2018 - 12:30 : FAMONOANA ZANDARY: Maty novonoin’ny andian’olona noho ny faneken’izy ireo ny fanatanterahana baiko (soit-transmis) avy amin’ny fitsarana hisamborana olona tao amin’ny fokontany Mantsaboribe, CR Ampandriankilandy, distrika Antsohihy ny 19 martsa 2018 tamin’ny 6 ora maraina ny zandary G2C NDRIAMIHAJA Laurent.
20/03/2018 - 12:00 : ANTENIMIERAM-PIRENENA TSIMBAZAZA: Tsy mbola manomboka ny fivoriana eny Tsimbazaza raha tamin'ny 10 ora no voafaritra. Mafampana ny raharaha, ary hentitra ny fitandroana ny filaminana.
20/03/2018 - 11:30 : FRANTSA: Notazonina amina toerana manokana ny Filoha Frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy noho ny resaka famatsiam-bola Libianina tamin'ny propagandiny.
20/03/2018 - 11:00 : HERINANDRON'NY AFIFAFA FJKM: Tontosaina ao amin'ny efitrano 201 trano Ifanomezantsoa Analakely ny Fanokafana ny herinandron'ny AFIFAB FJKM, na ny Asa FIfandraisana sy FAmpahalalam-Baovao. Misy ny fampirantiana atao mandritra ity herinandro ity.
20/03/2018 - 10:30 : FILAZANA AVY AMIN'NY AIRTEL: Ialana tsiny ny tsy fahafahanao miantso sy mandefa SMS amin’ny tambazotra Airtel nohon’ny olana ara teknika teo amin’ny JIRAMA. Efa eo amperin’asa ny teknisianin’i Airtel hamerenana izany amin’ny laoniny. Azonao atao hatrany nefa ny misitraka ny Internet"
Archive du 20161110
Analakely Notafihan�ny milisy ny kaominina
Nisehoana savorovoro indray teny Analakely omaly hariva. Tonga nanao fandaminana teny ny polisy mpandamina ny tsena.
Lany I Donald Trump Mihorohoro izao tontolo izao
Nivadika ny rasa. Ny Repoblikanina no hitantana an�i Etazonia manomboka izao. Ilay mpanefoefo 70 taona Donald Trump no lany hitantana ny Bekintana ao anatin�ny 4 taona.
MMM sy VPM/ MMM Hisara-bazana ihany koa ?
Manoloana ny fanambarana nataon�ny avy eo anivon�ny antoko Malagasy Miara Miainga nilaza fa misandoka andraikitra ny avy eo anivon�ny vondrona miara-dia amin�ity antoko politika ity
Vondrona FFT Nandika ny lalampanorenana...
Efa nandika lal�mpanorenana daholo ireo mpikambana ao anatin�ilay vondrona FFT (Firaisankina ho Fampandrosoana ny Tanindrazana, hoy ny avy eo anivon�ny fikambanana fiverenana an-doharano.
Miaramila Malagasy Efa samy manao izay tiany ?
Tompon�andraikitra ambony 20 be izao no nosoloina teo anivon�ny foloalindahy tamin�ny alalan�ny filankevitry ny minisitra notanterahana omaly. Ny tafika no tena voakasik�izy ity.
Fivorian�ny Frankofonia Tsy hipetraka eto i Fran�ois Hollande
Andro vitsy tsy hahatongavan�ny Frankofonia, tsy mbola mazava na tena ho avy eto Madagasika ny filoha Frantsay Fran�ois Hollande amin�io fihaonana an-tampony andiany faha-16 hatao eto Antananarivo ny 22-27 novambra io na tsia.
Robert Yamate-Masoivoho Amerikanina �Aza manahy amin�ny fahalanian�i Trump�
Nilaza omaly ny masoivoho Amerikanina eto miasa Madagasikara Robert Yamate fa "tsy hisy zavatra maro hiova amin�ny politikan�i Etazonia manoloana an�i Madagasikara.
Senatera Rakotovazaha Olivier Sambany tonga aloha ny volavolana tetibolam-panjakana
Efa fanao hatrizay ihany ny fampiofanana miaraka amin�ny Eisa tahaka itony saingy ny nampiavaka azy tamin�ity indray mitoraka ity dia ireo � parlementaires francophones � ahitana ny senatera vitsivitsy sy depiote maromaro no nisitraka izany tety amin�ny
Soa fianatra !
Tena nanofy aho omaly ry Jean hoe nisy fifidianana, hono, teto amintsika dia iray andro monja dia vita sy hita ny valiny ary nifampiarahaba sy nifampitsodrano ny mpifanandrina.
Tondro famantarana lalana amin�ny frankofonia 200 no natolotra omaly
Natolotra tamin�ny fomba ofisialy tetsy amin�ny minisiteran�ny fitaterana etsy Anosy omaly ny tondro famantarana lalana (Panneaux de signalisation routi�re ) miisa 200 avy amina sehatra tsy miankina iray.
Vahoaka malagasy Andrasana hanao dingana lehibe
Lesona ho an�izao tontolo izao ny fifidianana sy ny vokany tany Etazonia omaly iny.
TVM sy OMDA Nahazo tale ihany ny farany
Misimisy ihany ny fanesorana sy fanendrena mpiasam-panjakana sy tompon�andraikitra ambony tao anatin�ny filankevitry ny minisitra notanterahana teny Iavoloha omaly. Ela ny ela ka nahazo mpitantana ihany ny ORTM (Office de la Radio et de la T�l�vision publique de Madagascar).
Raminohery Etienne Mila olom-banona ny firenena Malagasy
Manoloana ny toe-javatra misy eto amin�ny firenena ankehitriny amin�ny fisian�ny fihetsika mamoafady mitranga etsy sy eroa manerana ny nosy dia tsy nisalasala naneho ny heviny Atoa Raminohery Etienne,
Fanorenan-trano tsy ara-dal�na Hentitra ny fanaraha-maso eny Ambavahaditokana
Miroso hatrany amin�ny fampanarahan-dal�na ny mponina ao aminy ny kaominina Ambavahaditokana, distrikan�Antananarivo Atsimondrano amin�izao fotoana izao.
Sampana mpamantatra ny toetr�andro Hanentana ny ankizy momba ny fiarovana ny tontolo iainana
Tokony ho efa hahazo ranon�orana isika eto an-drenivohitra nanomboka tamin�ity herinandro ity raha ny fanazavan-dRandrianarivelo Maminirina, tompon�andraikitry
Zaza vao teraka eto Madagasikara Tsy ampy lanja avokoa ny 20 %
Araka ny tarehimarika nivoaka farany ny taona 2015 dia tsy ampy lanja avokoa ny 20 %-n�ireo zaza vao teraka manerana ny Nosy, izany hoe latsaky ny 2kg sy 500
Lyc�e Saint Vincent de Paul Mpianatra 4 no indray nanjavona
Mpianatra efatra no indray nanjavona tsy hita nanomboka ny alatsinainy hariva teo tao amin�ny Lyc�e Saint Vincent de Paul Ambatonilita.
Ny fifidianana sy ny voka-pifidianana tao etazonia izao no mbola vaovao manakoako indrindra eran-tany hatreto.